भिडियो: सामग्री बनाम ब्याकलिks्क | Martech Zone
धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो वेबसाइटको अप्टिमाइजेशनमा उनीहरूको समय बेच्छन् र बेच्छन्, र अर्को साइटको उच्च स्तर छ भने अनुकूलित नभएको बेला उनीहरूको टाउकोमा कोरिरहन्छन्। यो किनभने सामग्री अप्टिमाइजेसन मात्र आधा लडाई हो, यसले अन्य साइटहरूको ध्यान खिच्दै छ जसले तपाईंको साइटलाई खोजी परिणामहरूमा वास्तवमै धक्का दिन्छ। खोजी ईन्जिनको काम प्रासंगिक परिणामहरू प्रदान गर्ने हो। यदि अन्य धेरै सम्मानित साइटहरूले तपाईंलाई औंल्याए र भने, "तपाईं जो हुनुहुन्छ त्यो हो!", खोज इञ्जिनहरूले त्यसमा बढी ध्यान दिनेछ!
टैग: 3उछालव्यवसाय परिणामक्याप्चाआत्मविश्वास प्रविधिहरूछुटकाराLyrisसीपी मापन गर्नुहोस्reCAPTCHA
सामग्री टिप: मोनरोको उत्प्रेरित अनुक्रम
मलाई लाग्छ कि सामग्री मेरो लागि राम्रो छ। मैले यसमा थप व्याख्या गरें, तपाईको ब्लगको लक्ष्य अधिक आगन्तुकहरू प्राप्त गर्नु हो। त्यसोभए तपाईंले आगन्तुकहरू वा दर्शकहरूबाट रुचि राख्ने सबै सान्दर्भिक आला सामग्रीहरू प्रदान गर्न र पोस्ट गर्नुपर्दछ। तपाइँको ब्लग मा जानकारी महत्वपूर्ण छ, अधिक राम्रो जानकारी राम्रो र अधिक साइटहरु तपाइँलाई फिर्ता लिङ्क हुनेछ।
ब्याकलिङ्क तपाईंको साइट राम्रो छ मापन गरिएको छैन। केहि वेबसाइटहरू अन्य आला वेबसाइटमा लिङ्क गरिएको थियो तर कम पीआर घनत्व वा पीआर मूल्याङ्कन प्राप्त गर्न सक्छ। केही अन्य साइटहरूले पनि कालो टोपी एकतर्फी लिङ्क एक्सचेन्ज प्रयोग गर्न सक्छन्।
आगन्तुकहरूले नवीनतम अद्यावधिकहरू वा महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू फेला पार्छन्। प्रायः आगन्तुकहरूले साइटहरूलाई बेवास्ता गरे जब तिनीहरूले ब्याकलिङ्क मार्फत लिङ्क खोल्छन् जब तिनीहरूले देख्छन् कि कुनै सान्दर्भिक वा महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू स्प्यामिङ छैन।